[Ankapobeny ] 28 Jolay, 2008 08:36
76777 no isan'ny mpanala Bac
Dia tonga tokoa ity ilay androm-panadinana ho an'ireo mpanala Bac ny taranja filôzôfia moa no adinina @ andro voalohany. Mirary soa ho an'ny ankizy mpiadina rehetra. Efa nivaly t@ asabotsy hifoha alahady kosa ny Bepc ary manodidina ny 49% eo no taham-pahafahana t@ izany. Miarahaba ireo afaka ary mampahery hatrany an'ireo tsy afaka kosa, mila miomana tsara indray @ taom-pianarana manaraka fa mbola misy izany ny lesoka.
Nifarana t@ asabotsy teo koa ny fifaninana lalao mm's tournement ka norombahan'i Andritiana efa tompon-daka t@ taona lasa ihany ny amboara t@ ity indray maka ity. Azo ambara fa tena havanana ny lehilahy @ lalao PES 2008 satria dia tena sahirana tokoa ireo nifaninana t@. Miandry ny lalao kitram-pokotany indray izany izao ny kilonga efa miala sasatra izay hanomboka @ 2 aogositra ho avy izao.
I Nina sy ny street fighters kosa no nahazo ny amboara teo @ fifaninana tecktonik. Na ilay dihy malaza ataon'ny tanora ankehitriny. Raha mijery an'ity dihy ity moa ka tsy asiana feo ny fahitalavitra dia tena sanatria ohatra ny mahita olona voan'ny ramanenjana ireny. LOL, samy manana ny vanom-potoanany moa ny dihy rehetra ny anay zao dia ny smurf sy ny breakdance no nalaza. Taloha tokoa izany.
Tafakatra eo @ dingan'ny manasan-dalana kosa ny Barea ny Madagasikara eo @ lalao cosafa castel cup! lalao atao any Afrika atsimo naharesy an'i Angola t@ isa 1 no 0 moa izy t@ ampahefa-dalana ary hidona @ i Mambas Mozambika indray. Mety mba hamaly bontana kosa angamba ireto omby masika ireto androany.